Indlela Yokufudumala Inkqubo YokuQiniseka Kwemandla - I-Method Makia
Ukubaluleka kokufudumala kwi-High Interval Training intensity
Yintoni efika engqondweni xa ubona okanye uva ilizwi elithi "ukufudumala"?
Ukuba unzima ukubuza ukuba ukhona namhlanje okanye ungcono ngaphandle, kufuneka wazi ukuba awuwodwa. Ukufudumala kudla ngokuvakalelwa kukuba kunzima kakhulu, kwaye akunakuncedo, ngoko abantu abazenzi ngokwaneleyo. Xa sineemvakalelo ezifanayo kwixesha elidlulileyo, senze imizamo ekhethekileyo yokwenza i-Method Makia-training training-ups, okanye iRoutine yoLungiso njengoko siyibiza, ikhangeleka kumntu onomdla kakhulu onomdla wokuba abantu abanakuwugatya. Kodwa ngaphambi kokuba siye phambili, makhe sigxile kumbuzo oyintloko ohambelana nokufudumala Sisiphi isizathu sokukwenza?
Cinga ukuba ulele njengomntwana. Ngokukhawuleza, izibane ziyaqhubeka, kwaye umntu uhlawula iifom zokubuyisela irhafu phambi kwakho ukuzalisa apho. Emva koko, kwaye ngexesha elifanayo, ucelwa ukuba uthini ukuba imozulu yesiLibini ifana nani, yintoni amagama oogogo nomkhulu bakho, kwaye unqume ukuba yeyiphi enye inshurensi eyahlukeneyo inika ithuba lokuba wamkele. Ngaba unakho konke okuphantsi kolawulo? Into efanayo eyenzeka emzimbeni wakho ukuba uyayinyanzelisa ukuba uhambe ngaphandle kokufudumala kwangaphambili. Umzimba wakho uvuswe ngokukhawuleza, kwaye uthumela ingqondo yakho ngomyalezo, kodwa yonke into iyenzeka ngokunyakaza. Yonke iseli emzimbeni wakho ithi "Yintoni na ngoku?" Ingxenye yomzimba wakho ixabisa iibhuleki, enye inxalenye yeengxaki, kunye neyonke iphosa. Ukuba uxinzelelo lungafakwa ngokukhawuleza, kodwa kusekho kumgangatho onzima, umzimba awunawo ixesha lokukhawuleza ukujikeleza kwakho, kwaye isiphumo sanele ngokukhawuleza kunokuqhathala.
Enyanisweni, igama elifanelekileyo kakhulu kunokufudumala liphakamisa. Uhlobo olulungileyo lokuvusa lukulungele ukuba umzimba wakho uhambe. Amaseli omzimba alungiselela isivumelwano, ukujikeleza kwegazi kusebenza ngokususa i-acids, izicubu ezixhasayo / ezixhasayo zikulungele ukuxinezeleka. Isibane sikhanyisa, umzimba wakho uphapheme, kwaye ulungele ukuthatha isenzo esipheleleyo.
Kubaluleke kakhulu ekuvukeleni kwinkqubo yeentlanzi, amajoyina, kunye nezixhumo ezixhasayo zokuzisa imeko yokulungela. Oku kuqinisekisa ukusetyenziswa kakuhle nokukhusela. Kukholelwa ukuba injongo enkulu yokwelula ukufudumala izihlunu ukwenzela ukuba ugweme izihlunu ezithandwayo kunye neentlobo. Enyanisweni, umzimba uphilisa izihlunu ezithintekayo kangcono kunamalungu amanxeba kunye nezicubu ezixhasayo. Xa inkqubo yeentlanzi "ilele," izihlunu zakho zilungele ukulimala, ingakumbi ngexesha loqeqesho olubandakanya ukuhamba ngokukhawuleza. Ngokuqinisekileyo, ukufudumala imizimba yakho kubalulekile ukuphepha ukulimala nokuqinisekisa ukuphumelela koqeqesho lwakho. Kubalulekile ukuphulaphula umzimba wakho ukuze izihlunu "zingasabi" kwaye "zibethe amabheki" ngaphambi kokuba uqeqesho luqale. Ukukhuthaza ukunweba kufuneka kwakhona kwenziwe ngokulula ekuqaleni kwaye kuphela xa ukufudumala kwenzeke ukunweba kungandiswa ukuze kufakwe izikhundla eziphambili. I-sweat ilungile, kodwa ukuvusa okuthatyathwe kukugqithiseleyo kungabalulekanga ukuba kusebenze ngokuqhelekileyo.
I-Arousal Routine Ngendlela yeMakia
Ngaphambi kokuba uvavanyo lwe-Method Makia luqalise, inkqubo yokuvuselela iqhutyelwa, kwaye ivuselela umzimba wakho ngokulungelelanisa ukuba i-Method Makia iyasebenza.
Ngoko Yintoni enhle malunga nePrahab? Ewe, into ebaluleke kakhulu kukuthobela injongo. I-Prehab yethu yenziwe ngokunyameka, ukuqonda, nokusebenza okunyukayo okuphakamisa zonke iindawo zomzimba wakho ngokukodwa kwimbono yokuqeqesha umzimba. Nangona kunjalo, siye sajonga kwakhona. I-Prehab yethu ifaka i-squat "ephilileyo" inomsebenzi onokunceda emhlane nasemadolweni, izibilini, i-elbow, kunye nokusetyenziswa kwegqeba elomeleza umzimba wakho ngokulungelelanisa ukunyuka kwamalungu omzimba.Iipakethe ezimnandi ezilula kunye nokukhawuleza ukwenza ngokulandela ividiyo Source .